Haleellaa Naannoo Benishangul Keessaa Kan Raawwate Ergamtoota IWEHAT Ka Mootummaan jedhe, Naannoon Tigraay Immoo Fudhatama Dhabsiise
Adoolessa 30, 2020
Itti gaafatamtuu waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay, aadde Liyaa Kaasaa
Guyyoota afur dura naannoo Benishangul aanaa Gubbaa gandeen hanga tokko keessatti haleellaan raawwatame to’atamuu isaa hoogganaan garee dhimmootii kominikeeshinii beeksisaniiru. Itti gaafatamaan waajjira dhimmootii kominikeeshinii aanaa Gubbaa obbo Girmaa Nigaatu VOAf akka ibsanitti naannoon sun gara nageenyaatti deebi’ee jira.
Waajjirri kominikeeshinii naannoo Amaaraa gama isaan haleellaa aanaa Gubbaa keessatti raawwatameen lammiiwwan lubbuu isaanii dhaban 14 naannoo maatiin isaanii argamanitti sirni awwaalcha isaanii raawwatamuu ibsee jira. Haleellaa sanaan illee namoonni 6 madaa’aniiru. Namoonni gandeen keessa jiraatanis sodatanii gara aanaa Sanaa kan dhufan yoo ta’u kaleesssa qaamotii nageenyaa waliin marii geggeessanii gara naannoo ofiitti akka deebi’an waliin dubbataniiru jedhan.
Obbo Gizaachoon akka jedhanitti haleellaa kana kanneen raawwatan ergamtoota IWEHAT jechuun isaanii ni yaadatama. Akkuma kanaan itti taafatamaan waajjira dhimmootii nageenyaa naannoo Benishangul Gumuz obbo Abdulaziis Mehammed haleellaa sana kanneen raawwatan ergamtoota Masrii fi IWEHAT jedhanii kanaafis kanneen to’annaa jala oolan raga dha jedhan.
Itti gaafatamtuun waajjira kominikeeshinii naannoo Tigraay aadde Liyaa Kaasaa dhimma kana irratti gaafatamanii, bulchitoota uummata isaanii bulchuu hin dandeenyetu uummati maal beeka jedhanii tuffachuu dhaan rakkoo uumame kamiifuu qaama sadaffaatti quba qabu jechuu dhaan yakka kana fudhatama dhabsiisaniiru.
Naannoo Tigraay irraa kan hafe kutaaleen Itiyoopiyaa kanneen biroon nageenyi isaa boora’eera, kunis mootummaan sirriitti bulchuu akka hin dandeenye mul’isa jedhan. Dandeettii dhabuu isaa dhoksuuf immoo IWEHAT fi paartii naannoo Tigraay bulchu himachuu hojii godhateera jedhan.
Paartiin Tigraayiin bulchu kan gaafatamu nageenyi naannoo isaa yoo boraa’e qofa kan jedhan aadde Liyaan haleellaa naannoo Benishaangulitti kan gaafatamu ofii isaa badhaadhina jedhee kan of waamuuf mootummaa uummati hin filannee dha jedhan.